हेर्दै जानुस्, अब सांसदसित ५ करोडमा सम्झाैता हुन्छ : दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री - अर्थ / वाणिज्य - कान्तिपुर समाचार
'सातै प्रदेशमा औद्योगिक ग्राम राख्ने कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ'
काठमाडौँ — यतिबेला सरकार बजेट निर्माणको चरणमा छ । यो धेरै महत्त्वपूर्ण क्षण हो । अधिराज्यभर रहेका चेम्बरको सुझाव लिएर निजी क्षेत्रले संयुक्त रूपमा हिजो मात्रै अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव दिइएको छ । हाम्रो अपेक्षा लक्षित कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) प्राप्तिको काममा सहयोग पुर्‍याउनु हो ।
उक्त लक्ष्यलाई पूरा गर्न निजी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। मुलुक संघीयतामा गएको छ। गत वर्ष बजेट संघीयतापछिको पहिलो थियो। जसकारण त्यहाँ केही 'ग्याप' देखिएको थियो।
हामी विकासको विकेन्द्रीकरण, आर्थिक विकेन्द्रीकरण र हरेक जिल्ला, क्षेत्रमा उद्योग होस् भन्ने चाहेका छौं। प्रदेशमा कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हामीले सुझाव पनि दिइसकेका छाैं। सरकारले खासगरी उत्पादकमूलक उद्योगलाई जोड दिनुपर्छ। यसमा के/के ग्याप छ भन्नेमा अर्थमन्त्री स्वयं जानकार हुनुहुन्छ। पर्यटन, सेवा क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान छ। कृषिमा पनि हामी एकैचोटि फडको मार्न सक्दैनौं। फडको मार्ने भनेको उद्योग क्षेत्रमा नै हो।
यसमा पनि नीति र कार्यान्वयन तहमा ग्याप देखिएको छ। त्यो ग्यापलाई पूरा गर्न थप मजबुद भएर जानुपर्छ। निजी क्ष्ाेत्रले दुई-चार कुरालाई देखेको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा नीति हो। लगानी भित्र्याउन, लगानीका लागि राम्रो नीति चाहिन्छ। त्यसका लागि नीतिमा सुधार हुन जरुरी छ। भर्खर लगानी सम्मेलन पनि सकिएको थियो। लगानी सम्मेलन अगावै निजी क्षेत्रले नीतिगत कुरालाई सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थियो। त्यसको सुधार पनि भइरहेको छ।
निजी क्षेत्रले जहिलै एकद्वार प्रणालीलाई जोड दिएको थियो। त्यसको सुरुवात भएको छ। त्यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिएको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा कार्यान्वयन नै हो। एकद्वारलाई कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
अहिलेको महत्त्वपूर्ण पक्ष पूर्वाधार हो। सन् २०२० लाई पर्यटन वर्षका रूपमा घोषणा गरिएको छ। त्यसका लागि पूर्वाधार, 'कनेक्टिभिटी' मा जोड दिनुपर्छ।
अर्थतन्त्रको एउटा बलियो क्षेत्र बैंकिङ हो। केही वर्षयता यो क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको छ। सरकारले विकास खर्चलाई बढाएर तरलता समस्या समाधान गर्न सक्छ। यो विषयमा सरकारको ध्यान जाओस्।
एकीकृत कर प्रणाली हुनुपर्छ। संघीयतापछि दोहोरो करको कुरा पनि आइरहेको छ। यो गुनासो पटकपटक अर्थ मन्त्रालयमा पनि राख्दै आएका छौं। आगामी बजेटमा एकीकृत कर प्रणालीको व्यवस्था आओस्।
निजी क्षेत्रले उद्योग विस्तार, युवा उद्यमका कुराहरू गरिहरेका छौं। यसकारण बजेटमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न विशेष नीति ल्याइयोस्।
स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएका वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि किन्नुपर्छ। यस्ता कुरा बजेटमा आउनुपर्छ। विगतका दिनका धेरै कुराहरू राम्रा पनि छन्। तर, कार्यान्वयनमा त्रुटि देखिएको छ। आउने दिनमा औद्योगिक विकास गर्न ७ वटै प्रदेशमा 'औद्योगिक ग्राम' राख्नु कुरा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
उद्योग विस्तारका क्रममा जग्गा प्राप्ति नै ठूलो समस्या देखेका छौं। त्यसलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले सधैं कार्यान्वयन क्षेत्रलाई नै जोड दिन्छ। गत वर्ष दुई तिहाइको बलियो सरकार गठन भएको थियो। यो सरकारले धेरै कुरा गर्न सक्छ। त्यसैले गत वर्ष अपेक्षा पनि धेरै थियो।
अर्थतन्त्रले फडको मारेर जान्न भन्ने अपेक्षा थियो। नतिजा अपेक्षित आएन। यो विषयमा निजी क्षेत्रले सम्बन्धित निकायसँग पटकपटक छलफल पनि गरेको छ। सरकार गठनपछि गत वर्ष संघीयताले सिर्जना गरेका केही कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले अझै पर्ख र हेर भन्ने थियो। अब कति पर्खेर हेरेर बस्ने?
बढदो व्यापार घाटामा निजी क्षेत्र पनि गम्भीर छ। त्यसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग विस्तारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ। पछिल्ला वर्षमा हामी सधैं आर्थिक समृद्धि भन्छाैं। आर्थिक समृद्धिको आधार के हो त?
आधार भनेको नीतिगत व्यवस्थामा सुधार हो। कतिपय नीतिनियम २६ वर्षअघिका छन्। त्यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। पूर्वाधार निर्माण पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। पूर्वाधारमा ध्यान नदिएरै पर्यटन वर्ष घोषणा गरेको हो कि भन्ने लागेको छ। पर्यटन भनेको काठमाडौं, पोखरा र चितवन मात्रै होइन।
पूर्वदेखि पश्चिमसम्मलाई पर्यटनमा जोड्नुपर्छ। हामीसँग संख्यात्मक रूपमा पर्यटक बढेका छन्। हामीले कफी खाने पर्यटन नभई धेरै खर्च गर्ने (क्वालिटी) पर्यटक भित्र्याउनुपर्छ। यसका लागि पर्यटकीय क्षेत्रमा होटल निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। दुर्गममा होटल सञ्चालन गर्दा अनुदान, कर छुट माग गरेका छौं। त्यसमा सरकारको ध्यान जाओस्। यी समस्याहरू समाधान नभएसम्म औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार तीव्र हुन सक्दैन। भएका उद्योग पनि बन्द हुने अवस्था आउन सक्छ।
वैदेशिक लगानी आकर्षणसँगै स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि ल्याउनुपर्छ। अब हामी परम्परागत उद्योग नभई तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्र, वस्तु र उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि (भ्यालुएड) गर्ने उद्योगमा केन्दि्रत हुनुपर्छ। 'पेटेन्ट राईट' को कुरा पनि छ। यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ। आर्थिक समृद्धि र विकासका आधार यिनी नै हुन्। निजी क्षेत्रको योगदान ५९ प्रतिशत भनिएको छ। त्यसका लागि निजी क्षेत्रलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्‍यो। यसकारण आगामी बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुनुपर्छ।